Madaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday laba masuul oo ka tirsan Xukuumadiisa | FooreNews
Home wararka Madaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday laba masuul oo ka tirsan Xukuumadiisa
Madaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday laba masuul oo ka tirsan Xukuumadiisa
fooreFeb 15, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa xilkii ka qaaday Guddoomiyihii Ha’yada qurbo-jooga Saleebaan Maxamed Faarax iyo Agaasimihii guud ee arrimaha dibadda Maxamuud Raagge Ibraahim oo isagu Isniintii shaaciyay inuu is casilay.
Sidaasi waxa lagu sheegay war-Saxaafadeed caawa ka soo baxay madaxtooyadda oo u dhignaa sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu Digreeto Madaxweyne oo Numberkeedu yahay JSL/M/XILQ/249/1-928/022012 Xilkii uu hayey kaga qaaday Mudane, Maxamuud Raage Ibraahim oo ahaa Agaasimihii Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Maadaama oo aad xilkii ka soo bixi weyday, xilalka Qaranka ayay dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo oo kolba cid hanan karta loo dhiibo.
Sidaa darteed, maadaama aad muddo soo haysay xilka Agaasiimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda, waxaan gartay in aan kaa qaado xilkii Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda.”
.Dhinaca kale, waxa isla war-saxaafadeed kale oo ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay in xilkii laga qaaday Guddoomiyaha Ha’yada qurbo-jooga Saleebaan Maxamed Faarax, waxaanu u dhignayd wareegtadaasi sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu Digreeto Madaxweyne oo Numberkeedu yahay JSL/M/XILQ/249/1-929/022012 Xilkii uu hayey kaga qaaday Mudane, Saleebaan Maxamed Faarax oo ahaa Gudoomiyihii Hay’adda Qurbajooga Somaliland.
Waxaan kaaga mahad-celinayaa mudadii aynu wada shaqaynaynay sidaa awgeedna Xilka Qaranka ayay dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo oo kolba cid hanan karta loo dhiibo.
Sidaa darteed, maadaama aad muddo dheer soo haysay xilka Gudoomiyaha Hay’adda Qurbajooga, waxaan gartay in aan kaa qaado xilkii Gudoomiyaha Hay’adda Qurbajooga.”
Previous PostMaydadka dhawr iyo Labaatan qof oo Soomaali ah oo ku soo caaryay xeebta Laas-qoray Next PostWasaaradda Arr. dibadda oo Hanti-dhawraha Guud ka Dalbatay inuu baadho ka sameeyo gudaheeda